सिलाइ कटाईबाट ढोडेनीका महिला आत्मनिर्भर बन्दै
By vijayafm on	 December 12, 2018 नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, विविध खबर, स्थानीय
गैंडाकोट । काम सानो तिनो भन्ने हुदैंन । गरे के हुन्न र ? घरमा नै बसेर घरायसी कामसँगै विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ । जसको माध्यमबाट आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ ।
यस्तै उदाहरणीय पात्र हुन्, गैडाकोट ३ ढोडेनीकी कृष्णमाया पोखरेल । विगत १९ वर्षदेखि सिलाइकटाइको काम गर्दै आउनुभएकी गैंडाकोट ३ ढोडेनीकी कृष्णमाया पोखरेलले घरायसी काम भ्याएर पनि महिनामा रु. १० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्नुहुन्छ । त्यो पनि आफ्नै गाउँ ठाउँमा बसेर । बिहान बेलुका घरको काम, दिउँसो केही खेतबारीको काम, खाली समय यही पेसा गर्नुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सीप र जाँगर हुनुपर्छ यी घरमा नै बसेर पनि मज्जाले गर्न सकिन्छ ।’ आपूmसँग भएको सीप प्रयोग गरेर उहाँ आत्मनिर्भर बन्नुभएको छ । चाहना हुने हो भने जोकोही महिला पनि सिलाइकटाइका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पोखरेलको बुझाइ छ ।
तर काम गर्ने जोश र जागर हुँदाहुदै पनि सिपको कमिले गर्दा महिलाहरुले काम गर्न नसकेकोे पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले दिने तालिम आजसम्म आप्mनो गाउँमा नआएको उहाँको गुनासो थियो । अरुले गरेको र देखेकै भरमा नै आपूmले सिलाइकटाइको काम सिकेको बताउने उहाँ सिपमूलक तालिमको खाँचो औंल्याउनुहुन्छ ।
उहाँजस्तै उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ, गैंडाकोट ३ कै मनकुमारी गुरुङ । घरमा खेर जाने समयको सदुपयोग गर्न सिकेको सिलाइकटाइ अहिले उहाँको आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘घरको काम भ्याएर खाली भएको समयमा सिकेको अहिले काम लागेको छ ।’ श्रीमान्को कमाइले मात्र घर चलाउन गाह्रो थियो । मनकुमारीले सिलाइकटाइ सिकेपछि अहिले त्यही पेसामार्फत घरखर्च जुटेको छ । घरव्यवहार चलाउन सजिलो भएको छ भने उहाँ आफैलाई यो पेसाले आत्मनिर्भर बनाएको छ । यसले उहाँमा उत्साह पनि थपिएको छ । आफ्नो हातमा सिप भएपछि अर्काकोमा हात फैलाउन नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सिलाइकटाइ पेसाले धेरै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । तर केही महिलाहरुलाई भने यही सीप नजानेकै कारण अप्ठ्यारो छ । यस्तै गुनासो छ, गैडाकोट ३ कै रेवती थापाको । उहाँले आपूmलाई सीप सिक्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि अवसर नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँजस्तै धेरै महिला सीप सिक्न चाहन्छन् । यस्ता कार्यमा उत्साह थप्न पनि तालिमको खाँचो रहेको गैंडाकोट ३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले बताउनुभयो । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तह तथा राज्यले पनि सिलाइकटाइजस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।